Iinjongo zezixhobo zokuzenzekelayo kunye neenzame zokuthengisa Martech Zone
Iinjongo zezixhobo zokuZenzekelayo kunye neenzame zeNtengiso
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 22, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 22, 2016 Douglas Karr
Kukho iindlela ezithile kwishishini lokuthengisa ledijithali esijongayo esele linefuthe kuhlahlo-lwabiwo mali nakwizixhobo- kwaye ziya kuqhubeka nakwilixa elizayo.
Ukusuka kwimbono yotyalo-mali, uhlahlo-lwabiwo mali lweenkonzo luya kukhula kancinci kwi-2016, ukuya kwi-1.5% yengeniso iyonke yeenkonzo. Ukonyuka kuya kubangela ukukhula okulindelekileyo kwingeniso yeenkonzo, nangona kunjalo, kubeka uxinzelelo ngakumbi kubathengisi ukwandisa umda kunye nokusebenza ngezixhobo ezongezelelekileyo. Umthombo: ITSMA
Ngamafutshane, uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso yedijithali luyaqhubeka nokukhula kwaye abathengisi abakwinqanaba le-C ngoku kulindeleke ukuba babekhona kwaye bakuqonde ngokupheleleyo ukuntsokotha komhlaba, izixhobo ezikhoyo, kunye nokwenza ingxelo eziyimfuneko ukuphucula ukufunyanwa kwenkampani kunye neenzame zokugcina. Ngenxa yokuqhushumba kwamajelo kunye nemfuno yokwandisa uninzi, Senza okungakumbi ngokuncinci… kwaye iya isiba nzima.
Nakuba Abasebenzi bezentengiso bayanda, ulindelo lokuba abathengisi benze okungakumbi ngokuqhubeka kancinci. Kwaye uninzi loxinzelelo kukutyala imali kwizixhobo zentengiso ezinceda ukunciphisa inani leeyure zomntu ezifunekayo ukuphendula, ukucwangcisa, ukwenza kunye nokulinganisa iinzame zentengiso.
Ukuzenzekelayo kunye neNgcaciso yeMithombo yoLuntu, abaBeki ndawo
Iarhente yethu yenza umsebenzi omncinci kwiinkampani ezinkulu kakhulu. Ngalo naliphi na ixesha losuku, kusenokwenzeka ukuba sinezixhobo ezizinikeleyo ezili-18 okanye ezinikezelweyo zisebenza kubathengi. Ukusuka kwiingcali zebrendi, kubaphathi beeprojekthi, kubayili, kubaphuhlisi, kubabhali besiqulatho… uluhlu luyaqhubeka kwaye luqhubeke njalo. Uninzi lwalo msebenzi lwenziwa ngokusebenzisana neminye imibutho, nangona kunjalo. Siphuhlisa isicwangciso kwaye benza isicwangciso.
Izixhobo ziyindlela enye esinokuthi ngayo sonyusa indawo yokuthinta kunye nabathengi kunye nethemba. Sisebenzisa ingqokelela yedeshibhodi, ukunika ingxelo, ukupapasha kwezentlalo, kunye nezixhobo zolawulo lweprojekthi. Injongo yezi zixhobo ayisiyiyo into ezenzekelayo kwimisebenzi yethu, nangona. Injongo yezi zixhobo kukwandisa ixesha esilichitha ngokobuqu nomthengi ngamnye kuzo zombini ukucacisa nokwandisa izicwangciso esizibekayo.
Njengoko ujonge ukutyala uhlahlo-lwabiwo mali ngokwenza imisebenzi yangaphakathi, ndiza kuqinisekisa ukuba injongo yakho ayikokutshintsha abantu, kukubakhulula ukuze benze eyona nto bayithandayo. Ukuba ufuna ukutshabalalisa imveliso yeqela lakho lentengiso-gcina ubenza ukuba basebenze ngaphandle kwezipredishithi kunye ne-imeyile. Ukuba ufuna ukwandisa imveliso, yenza ukuthengwa kwezixhobo kuqala ukuze iqela lakho libe nayo yonke into eliyifunayo ukuze liphumelele.
Ekugqibeleni, injongo yayo nayiphi na inkqubo enxulumene nentengiso kufanelekile ukuba yenza ixesha elinemveliso ngakumbi kunye nethemba lakho kunye nabaxhasi, hayi ngaphantsi. Velisa ngakumbi abathengi bakho kwaye uya kuvuna izibonelelo. Eminye imizekelo:
Sisebenzisa Umchazi-magama weNtengiso ukucoca ezantsi nokunikezela ngedatha yeGoogle Analytics ngendlela abathengi bethu abayiqonda ngcono. Oko kusenza ukuba sikwazi ukunxibelelana ngokuqhubekayo kunye nokubonelela ngesicwangciso sokuphucula endaweni yokuchitha ixesha uzama ukucacisa kubahlalutyi idatha.
Sisebenzisa gShift ukubeka iliso kwimidiya yoluntu kunye nefuthe lokukhangela omnye komnye nakumgca osezantsi. Igalelo Kunzima, ukuba akunakwenzeka, ngaphandle kwesixhobo esifana ne-gShift. Ukuba awulinganisi iziphumo zesicwangciso sakho somxholo ngokuchanekileyo, uza kuba nexesha elinzima lokuchaza ukuba kutheni umxhasi wakho kufuneka aqhubeke nokutyala imali kuyo.
SisebenzisaHootsuite, Bomgcini, yaye jetpack ukulawula imizamo yethu yokupapasha eluntwini. Ngelixa siliqela elincinci, senza ingxolo enkulu kwi-Intanethi. Ngokuchitha ixesha elincinci kupapasho, ndiyakwazi ukuchitha ixesha elininzi ndinxibelelana nabaphulaphuli bam beendaba zentlalo.
Ngasinye sezi zixhobo sisenza ukuba sikwazi ukujonga iinzame zethu apho kufuneka zikhona kunokuba sisebenze kwimisebenzi yesiqhelo abangenakuyixabisa abathengi bethu. Bafuna iziphumo-kwaye kufuneka sisebenze kuzo!
tags: Uhlalutyoiinjongo esizisebenzelayoizixhobo ezenzekelayourhweboukuzenzekela ngokuzenzekelayoingxelo
Epreli 27, 2016 ngo-9: 28 AM
Phakathi kwezinye izixhobo zentengiso yedijithali iGoole Analytics yeyona ixhaphakileyo kwaye isetyenziswa. Ziziphi iindlela zakho ezilungileyo zokuphunyezwa kwe-Google Analytics kumxholo wokuthengisa / ukukhula kwengeniso?
Ngaba nosuku olumnandi!
Epreli 27, 2016 ngo-12: 50 PM
Oko kuxhomekeke kumxhasi, kodwa ngokubanzi sifuna ukwenza iifuneli zenguquko ezibuyela umva ukusuka kulo naliphi na i-Call-To-Action ukuya kwindawo apho undwendwe lungena kwindawo. Kwaye iingxelo zesiko ziyimfuneko ukunciphisa ukudideka kwabathengi.